''နန်းဆုက ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ရတာ သိပ်ပြီးတော့ ဝါသနာမပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် လူမှုကွန်ရက်မှာ သိပ်မတွေ - Yangon Media Group
”နန်းဆုက ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ရတာ သိပ်ပြီးတော့ ဝါသနာမပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် လူမှုကွန်ရက်မှာ သိပ်မတွေ
သရုပ်ဆောင်နန်းဆုဦး၏ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ ယခုလိုပဲ တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
မေး-ကြောက်ကြောက်ကြောက်-၂ ဇာတ်ကားမှာ ဘယ်လိုကာရိုက်တာမျိုးနဲ့ ပါဝင်ဖြစ်မလဲ။
ဖြေ-အမှန်အတိုင်းပြောရရင် နန်းဆု ကြောက် ကြောက်ကြောက်-၁ ကို မကြည့်ဖူးဘူး။ ဒါပေမဲ့ သရဲကားလေးတော့ သိထားတယ်။ အခု ကြောက်ကြောက်ကြောက်-၂ မှာကျတော့ နန်းဆုက ကိုနေတိုးရဲ့ချစ်သူနေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရမှာပါ။ ဇာတ်ကားလေး ကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပါပဲ။ လူငယ်တွေ အုပ်စုလိုက်ခရီးတစ်ခုကို ထွက်ကြတယ်။ နန်းဆုတို့ကတော့ ခိုးပြေးကြတာ။ အဲဒီလို သွားရင်းနဲ့မှ သရဲခြောက်ခံရတဲ့ပုံစံလေးပါ။
မေး-ကားပေါ်မှာ သရဲခြောက်ခံရတဲ့ ပုံစံလေး ပေါ့။
ဖြေ-အင်းဟုတ်တယ်။ နန်းဆုတို့ စီးသွားတဲ့ကားကိုက သရဲခြောက်တာ။ အဲဒါကို နန်းဆုတို့ကမသိဘူး။ သွားရင်းလာရင်းနဲ့မှ အခြောက်ခံရတော့မှသိကြတာ။ စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ ကြောက်စရာ ကြီးပေါ့နော်။ ကိုယ်စီးသွားတဲ့ကားက သရဲ ခြောက်တာဆိုတော့လေ။ ပြန်ဆင်းလို့လည်း မရ တော့ဘူး။ ပိတ်မိနေတဲ့ပုံစံလေးပါ။ ဒါကိုမှ ပရိသတ် စိတ်ဝင်စားအောင် ရိုက်ကူးမှာပါ။
ဖြေ-အခုက နန်းဆုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပေါ့နော်။’အစိုးမရ အနတ္တ’ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ထားတယ်။ အဲဒီ ဇာတ်ကားကလည်း မပြီးသေးဘူး။ တချို့ဇာတ်ဝင်ခန်း လေးတွေက အခက်အခဲတချို့ကြောင့် ရိုက်ကူးဖို့ကျန်နေ သေးတယ်။ ပြီးတော့ ဒီကြားထဲမှာ နန်းဆု ဗီဒီယိုဇာတ် ကားတစ်ကားရိုက်ဖြစ်တယ်။
မေး-‘သစ္စာချည်တိုင်’ဇာတ်ကားကရော ဘယ်တော့လောက် ပြသမယ်လို့ သိထားလဲ။
ဖြေ-‘သစ္စာချည်တိုင်’ဇာတ်ကားက ပြတော့မယ်လို့တော့ သိထားတယ်။ ဘယ်တော့ပြသမယ်ဆိုတာကတော့ နန်းဆုတို့လည်း မသိသေးဘူး။
မေး-‘သစ္စာချည်တိုင်’ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရတွေရှိရင်လည်း ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ-‘သစ္စာချည်တိုင်’ဇာတ်ကားက အကြာကြီးရိုက်ကူးရတယ်။ နန်းဆုတို့အစတုန်းက မှန်းထားတာက နန်းဆုပါဝင်ရတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းဆိုရင် နှစ်ပတ် လောက်နဲ့ပြီးမယ်လို့ မှန်းထားပေမယ့်လည်း တကယ်တမ်းရိုက်ကူးတော့ တစ်လကျော် ကျော်လောက်ရိုက်လိုက်ရတယ်။ ရိုက်ကူး ရေးက ကြာတယ်။ အမှတ်တရတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ ခရီးထွက်ပြီးရိုက်ကူးရတာ တွေလည်းရှိတယ်။
မေး- Facebook သိပ်မသုံးဖြစ်တာလား။ လူမှုကွန်ရက်မှာ သိပ်မတွေ့ရလို့လေ။
ဖြေ-နန်းဆုကလေ အနုပညာအလုပ်တွေ တော့ ဆက်တိုက်လုပ်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နန်းဆုက ဓာတ်ပုံတွေဘာတွေ ရိုက်ရတာ သိပ်ပြီးတော့ဝါသနာမပါဘူး။ အဲဒီအခါကျတော့ ပုံတွေသိပ်မရိုက် ဖြစ်တော့ လူမှုကွန်ရက်ကိုလည်း သိပ်မတင်ဖြစ်ဘူး။ ပရိသတ်တွေက ပုံ တွေတင်ပေးပါ။ လွမ်းတယ်ပြောလာရင်တော့ ပရိသတ်တွေအတွက် သီးသန့်ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ပေး တယ်။ တင်ပေးဖြစ်တယ်။ ပုံတွေ အများ ကြီးမတင်ဖြစ်ပေ မယ့်လည်း ပရိသတ်နဲ့တော့အရမ်းအလှမ်းမ ဝေးသွားပါဘူး။
'ကျွန်တော်တို့ ခေတ်တုန်းကတော့ ဘယ်အဆိုတော်ဆိုတာ ကောင်းလဲ။ ဘယ်အဆိုတော်နဲ့ဆို ငွေရှာရ အဆင်ြေ??
ကိတ်အာဘန်နှင့် ခရစ္စစတာပလီတွန်တို့ CMAs ဂီတဆုပေးပွဲ၌ အမြင့်ဆုံး ဆုများဆွတ်ခူး
လေထုညစ်ညမ်းမှု လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် ထိုင်းနိုင် ငံတွင် စက်ရုံ ၆ဝဝ ခန့် ကို ယာယီပိတ်သိမ်း
ညောင်ချောင်းသာဆိုင်ခန်းများ ယမန်နှစ်က အရှုံးပေါ်ခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်သင်္ကြန်ကာလတွင် အမြတ်ရရှ??
လူ သိန်းဂဏန်းရှိသော မြို့နယ်များတွင် ရွေး/ကော် ဝန်ထမ်း သုံး၊ လေးဦးသာရှိဟုဆို